(tonga teto avy amin'ny Main Page)
I Eorôpa dia kôntinenta faharoa kely indrindra eto an-tany amin' ny lafiny velaran-tany (10,18 tapitrisa km2), na 2 %-n' ny velaran' ny tany maina na 6,8 %-n' ny velaran-tan' ny Tany. Misy firenena dimampolo ao Eorôpa, ary i Rosia no ngeza indrindra amin' ireo na amin' ny lafiny isa-mponina na amin' ny lafiny velaran-tany, ary i Vatikàna no firenena kely indrindra amin' ireo, na amin' ny lafiny isa-mponina na amin' ny lafiny velaran-tany. I Vatikàna koa no firenena kely indrindra eto an-tany. (tohiny...)
Mifanjohy mankany Ôseania ny nosy sy ny tamba-nosy ao atsimo-atsinanana: isan' izany ireo nosy Filipina sy ireo nosin' i Indônezia (i Somatra sy i Java ary i Solaoesy), i Bôrneô ary i Ginea Vaovao. Ao avaratra atsinanan' i Azia no ahitana ireo nosin' i Japàna sy ny nosin' i Sakalina. Ao amin' ny Ranomasimbe Indiana no misy ny nosy Srilanka sy ireo tamba-nosy madinika toa ny an' i Maldiva ary ireo nosy Andamàna sy Nikôbara. (tohiny...)
Zoma, 1 Jolay 2022
Mbola tsy misy ankehitriny ny pejy mikasika ny Zoma 1 Jolay ao amin'ny efemerida. Ka raha tianao dia azonao ampiana na foronina ity pejy ity.